‘जति बाँच्छु, सबैको भएर बाँच्न सकूँ’ – ।।दाङ खबर।।
Home / ब्लग/विचार / ‘जति बाँच्छु, सबैको भएर बाँच्न सकूँ’
‘जति बाँच्छु, सबैको भएर बाँच्न सकूँ’
२०७४, १९ पुष बुधबार १२:११	ब्लग/विचार
पोखरा, पुस १९ । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाएका डा. रामवरण यादवलाई न यहाँसम्म आउन गरेका दुःखको सुस्केरा काढेर बस्नु छ, न राजनीतिक जीवनका उकाली ओराली सम्झेर आलापित हुनु छ ।असजिलो गरी बितेका बाल्यकाल, दुःख र संघर्षले डाक्टरी पढ्दाको समय र राजनीतिमा हाम फाल्दाको बखतले नोस्टाल्जिक त बनाउँछ । तर, त्यही दिन सम्झेर दुःखको रहमा पौडनेवाला छैनन, उनी ।
बाँकी जीवन सबैको बनेर बाँचु भन्ने हृदयमा राखेका छन उनले । ‘७६ वर्षको भएँ । जति बाँच्छु सबैको भएर बाँच्न सकुँ भनेको छु’ डा. यादवले कुराकानीको मेलो बढाए ।
यति भनिसकेर आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा बताए । ‘अब म ठिक छु । अमेरिकाबाट प्रोस्टेटको ट्युमर फालेर फर्केपछि केही महिना म डिस्टर्भ भएँ । अझै पनि आराम गर्दैछु । बिहानबेलुका औषधी लिन्छु । खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्छ,’ यादवले सुनाए, ‘३ महिनामा ब्लड टेस्टका लागि पठाउनुपर्छ । जाडोपछि म अलि बढी बाहिर निस्कन्छु ।’
मानव मिलन संस्थाका संस्थापक जैन सन्त नेपाल केशरी डा. मणिभद्रमुनिद्वारा लिखित ‘आत्मानुसन्धान’ किताबको लोकापर्ण गर्न पोखरा आएका राष्ट्रपति डा. यादव मंगलबार बिहान केही समय गर्फिए ।
राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव फुर्सदिला बने । तर, हाइसञ्चो भएर बस्न भने पाएनन । प्रोस्टेटमा ट्युमर देखिएपछि उपचारका लागि भारतदेखि अमेरिकासम्म पुगे । फर्केपछि पनि धेरै दौडधुप नगर्न डाक्टरको सल्लाह छ ।
स्वास्थ्य पुरै ठिक भएपछि भने बढी बाहिर निस्कने उनी बताउँछन । चुरे बचाऊ अभियानबारे जनतालाई बुझाउने गरी आफू बाहिर निस्कने उनको भनाइ छ । ‘अब चुरे संरक्षण कार्यक्रममा म अलि बढी खटिनेछु । चुरेको अवस्था बेहाल छ । चुरे बजाउन बचाउन सकेनौं भने हामीले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्नेछ,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँगै समाजलाई जोड्ने, डेमोक्रेसी बुझाउनेतिर लाग्नेछु तर, अहिले अलि स्वास्थ्यले अझै दिएको छैन ।’
विहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म केके गर्ने उनी रुटिङमै चल्छन । बिहान साँडे ४ देखि ५ बजेसम्ममा उनी उठिसक्दा रहेछन । उठ्ने बित्तिकै पहिलो एक्सरसाइज गर्छन अनि मन तातोे पानी पाउँछन । नित्र्य कर्मपछि उनी नियमित मर्निङ वाकमा निस्कन्छन ।
मर्निङ वाकमा उनले एउटा कुरा प्राय छुटाउँदैनन, त्यो हो रेडियो । पहिले भजन सुन्छन अनि देशको हालखबर । देशको पहिलो खबर उनले रेडियोबाटै लिँदा रहेछन । साढे ५ देखि पौनै ७ सम्म उनको मर्निङ वाकको समय हो । फर्केर नुहाइधुवाइ गरेपछि फेरि उनलाई एक्सरसाइज गर्नुपर्छ । प्रोस्टेटको अपरेसनपछि त्यसका लागि एक्सरसाइज गर्नुपर्ने उनी बताउँछन ।
पत्रपत्रिकाका समाचार लेख पढ्नु, देशविदेशका घटनाको जानकारी लिनु उनको दिनचर्यामै पर्छ । महत्वपूर्ण अनलाइनका समाचार पनि उनी मगाएरै हेर्छन ।
१० र ११ बजेसम्म उनी पत्रिका पढ्नै लाग्छन । बिबिसीको समाचार सुन्नु उनको लतजस्तै हो । दही, रोटी, सागपात उनको आहार बनेको छ । माछामासु नखान डाक्टरले भनेको छ । कहिलेकाँही साना माछा स्वाद लिन खोज्न जिब्रोले । साढे ११ बजेतिर उनी खाना खान्छन र एक, डेढ घण्टा आराम गर्छन ।
बाहिर जाने काम खासै नहुने भएपछि प्राय निवासमै हुन्छन पूर्वराष्ट्रपति यादव । दिउँसोको समय प्राय भेटघाटमै बित्छ । भेट्न चाहनेहरुलाई दिउँसोकै समय दिएका हुन्छन । कार्यक्रममा बोलाउन आउनेहरुको लाइनै लाग्छ निवासमा । तर उनी कमैमात्र कार्यक्रममा जान्छन र, जानै परे पनि छानेरमात्रै जान्छन ।
राष्ट्रिय गौरव, संविधान र देशलाई नै फाइदा पुग्ने खालको कार्यक्रम, सेवा भावले गरिएको कुनै कार्यक्रम हेरेर उनले कार्यक्रममा आउनेरनआउने जानकारी गराउने रहेछन । ‘राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले कार्यक्रममा जाँदा विचार र्पुयाउनुपर्छ । कुन कार्यक्रमको उद्देश्य के हो हेरेरमात्र जाने गर्छु,’ यादवले प्रस्ट्याए ।
किताब उनको फुर्सदको साथी बनेको छ । ‘यो संसारमा हामीले पढ्न बाँकी कति कुरा होलान ? संसारमा निस्किएका उपयोगी र जान्नै पर्ने किताब पनि पढ्नु भन्दाभन्दै छुटेका छन,’ पूर्व राष्ट्रपति यादवले भने, ‘मैले डाक्टरी पढ्दादेखि अहिलेसम्म पढेका किताबभन्दा धेरै किताब बाहिर छन । म तिनै किताबहरु पढिरहेको छु ।’
कस्ता किताब पढिरहेका छन त उनी ? ‘म अहिले आध्यामिक किताबदेखि विश्वका महामानवहरुको किताब पढिरहेको छु । जो पढ्नै पर्ने किताबहरु भएर पनि छुटेका थिए ।’
रामायण लगायत किताब पढिसकेको भए पनि दोर्होयाउन मन लाग्छ उनलाई । महाभारत केही पढे, केही टिभीमा हेरेछन । अहिले भागवत गीता पनि पढिरहेका छन ।
धेरै व्यस्त नभए पनि एक्लोपनाको महसुस गर्न भने नपरेको डा. यादव सुनाउँछन । ‘एक छोरा राजनीतिमै होमिएको छ भने अर्को छोरा अमेरिकातिर छ’ पूर्व राष्ट्रपति यादवले भने, ‘छोरी मसँगै बस्छिन । छोराछोरीले मेरो धेरै ख्याल गर्छन ।’
उनका जेठा छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा धनुषाबाट विजयी भएका थिए भने अहिले पनि प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार थिए । उनका कान्छा छोरा चन्द्रशेखर अमेरिका र छोरी अनिता उनकै साथमा छन ।
छोराछोरीले पनि देश र समाजका विषयमा बुझ्ने तथा दख्खल राख्ने उनी बताउँछन । ‘बुबा अब हजुरले राजनीति छोड्नुपर्छ । संविधानको पक्षमा, देशका पक्षमा मात्र बोल्नुपर्छ, सामाजिक काममा लाग्नुहोस भन्छन,’ डा. यादवले भने ।
२०७४, १९ पुष बुधबार १२:११
Previous मुख्यमन्त्रीको सहज बाटोमा शंकर
Next प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अलग अलग रंगको कुर्सी, वार्षिक सञ्चालन खर्च एक अर्ब ७० करोड